नेप्से विश्लेषण | गृहपृष्ठ | Page 2
दोस्रो घण्टामा ३.३२ अंक घट्यो नेप्से (१ बजेको अपडेट)
जेठ ६, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टाको अवधिमा ३ दशमलव ३२ अंक घटेर १ हजार ३१३ दशमलव ५...
एक घण्टामा ०.४८ अंकले बढ्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)
जेठ ६, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको एक घण्टाको अवधिमा शून्य दशमलव ४८ अंकले बढेर १ हजार ३१७ दशमलव...
१३१६.८४ विन्दुमा पुगेको नेप्सेमा १ अर्बको कारोबार, कुन कम्पनीमा लाग्यो सर्किट ?
जेठ ५, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १ दशमलव ८७ अंक घटेर १ हजार ३१६ दशमलव ८४ विन्दुम...
५.८४ अंक घट्यो नेप्से (२ बजेको अपडेट)
जेठ ५, काठमाडौं (अस) । आइतवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा ५ दशमलव ८४ अंक (०.४४ प्रतिशत) घटेर १ हजार ३१२...
२.२६ अंक घट्यो नेप्से (१ बजेको अपडेट)
जेठ ५, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो दिन आइतवार नेप्से कारोबार भएको पहिलो दुई घण्टामा २ दशमलव २६ अंक (०.१७ प्रत...
४ दिन २९.०४ अंकले बढेको परिसूचक पाचौं दिन २.२९ अंकले घट्यो, नाफा बुकमा लगानीकर्ता, कुन कम्पनीमा लाग्यो ग्रीन सर्किट ?
on: २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १७:०६ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
जेठ २, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से २ दशमलव २९ अंकले घटेर १ हजार ३१८ दशमलव ७१ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार ३२२ दशमलव ६८ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक ४० मिनेटमा १ हजार ३२६ दशमलव ६...	बिस्तृतमा
४० मिनेटमा १३२६.६९ विन्दुसम्म पुगेको नेप्से एक घण्टामा १३२१.५२ विन्दुमा (१२ बजेको अपडेट)
on: २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:०८ नेप्से विश्लेषण, लगानी
जेठ २, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से कारोबार भएको ४० मिनेटमा १ हजार ३२६ दशमलव ६९ विन्दुसम्म पुगेको परिसचूक एक घण्टामा ओरालो लागेर १ हजार ३२१ दशमलव ५२ विन्दुमा आइपुगेको छ । सो अवधि...	बिस्तृतमा
करीब एक वर्षकै उच्च विन्दुमा नेप्से, १३३४.०५ विन्दुसम्म पुगेको नेप्से अन्त्यमा १३२१ विन्दुमा बन्द, सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनी कुन ?
on: १ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:२४ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
जेठ १, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से ५ दशमलव ५५ अंकले बढेर १ हजार ३२१ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार ३१६ दशमलव ९७ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक १ हजार ३३४ दशमलव ०५ विन्दुसम्म पुगेको थियो । करीब...	बिस्तृतमा
१०.१६ अंकले नेप्से बढ्दा विशाल बजारको शेयरमा ग्रीन सर्किट (१ बजेको अपडेट)
on: १ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:११ नेप्से विश्लेषण, लगानी
जेठ १, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा १० दशमलव १६ अंकले बढेर १ हजार ३२५ दशमलव ६१ विन्दुमा पुगेकोे छ । १२ समूहको परिसूचकमा व्यापार समूहको परिसूचक ५ दशमलव ३५ प्रतिशत...	बिस्तृतमा
एनसीसी र शिवमको सर्वाधिक कारोबार, एक घण्टामा २८ करोडको कारोबार (१२ बजेको अपडेट)
on: १ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:१० नेप्से विश्लेषण, लगानी
जेठ १, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से कारोबार भएको एक घण्टामा ११४ कम्पनीको रू. २८ करोड ५८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । एनसीसी बैंकलाई बोनस वितरण गर्न बाटो खुलेपछि कम्पनीको सर्वाधिक रू. ६...	बिस्तृतमा
नेप्से १४.१२ अंकले बढ्दा कारोबार रकम १ अर्ब नाघ्यो, तीन कम्पनीको शेयर मूल्यमा बढेर सर्किट, कुन कम्पनीको भयो सर्वाधिक कारोबार ?
on: ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १६:४९ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
वैशाख ३१, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से परिसूचक १४ दशमलव १२ अंकले बढेर १ हजार ३१५ दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टाको अवधिमा १ हजार ३२१ विन्दुमा पुगेको थियो । ने...	बिस्तृतमा
हालको अवधिसम्म नेप्से १३०४ विन्दुमा (१ बजेको अपडेट)
on: ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १३:०७ नेप्से विश्लेषण, लगानी
वैशाख ३१, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्सेको वेबसाइटमा समस्या आएका कारण आम लगानीकर्ताहरुले कारोबार हेर्न पाएका छैनन् । ब्रोकरमा भएको कारोबारको जानकारी अनुसार हालको समयमा नेप्से परिसूचक १ हजार...	बिस्तृतमा
१३०१ विन्दुमा नेप्से, ७८ करोड रुपैयाँको कारोबार, सर्वाधिक व्यापार हुने कम्पनी कुन ?
on: ३० बैशाख २०७६, सोमबार १६:०६ नेप्से विश्लेषण, लगानी
वैशाख ३०, काठमाडौं (अस) । सोमवार एक दिनको कारोबार अवधिभर नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ३० अंक बढेर १३०१ दशमलव ३४ विन्दुमा बन्द भएको छ ।१२९५ दशमलव ९९ विन्दुबाट शुरु भएको नेप्से परिसूचक घटबढ हुँदै सम...	बिस्तृतमा
१२९९.८६ विन्दुमा नेप्से, शिवम् सिमेण्टको सर्वाधिक कारोबार (१२ बजेको अपडेट)
on: ३० बैशाख २०७६, सोमबार १२:१३ नेप्से विश्लेषण, लगानी
वैशाख ३०, काठमाडौं (अस) । सोमवार कारोबार भएको १ घण्टामा नेप्से १ हजार २ सय ९९ दशमलव ८६ विन्दुमा पुगेको छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ दशमलव ८३ अंकले बढेको हो । सो अवधिमा शिवम् सिमेण्टको सर्व...	बिस्तृतमा
on: २९ बैशाख २०७६, आईतवार १७:४१ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
वैशाख २९, काठमाडौं (अस) । साताको शुरुको दिन नेप्से परिसूचक अन्त्यमा ३ दशमलव शून्य ७ अंकले बढेर बन्द भएको छ । १ हजार २९१ दशमलव १६ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक दोस्रो घण्टाको अवधिसम्म घटबढमा रह...	बिस्तृतमा